तपाइँको ब्लग वेबसाइट कसरी बनाउने - With6Easy Steps - Learn Expert Blogging
एक ब्लग वेबसाइट बनाउन धेरै सजिलो छ. ब्लगिंग एक प्रकारको वेबसाइट हो जुन विशेष गरी सामग्री लेखनमा केन्द्रित छ. अधिक मूल्यवान जानकारी तपाइँ प्रयोगकर्ताहरु लाई उनीहरु तपाइँको वेबसाइट मा फिर्ता लेखहरु पढ्न को लागी प्रदान.
अधिक सामान्य भाषा मा, हामीले समाचार लेख देखेका छौं, सेलिब्रिटीहरु र उनीहरुको नियमित अपडेट को बारे मा जानकारी, आदि सबै ब्लगिंग को भाग हो.
ब्लगरहरु मूल रूप बाट वास्तविक जानकारी लेख्छन् के एक विशेष चीज को बारे मा गलत र सही मा आफ्नो दृष्टिकोण संग. उदाहरणका लागि, एक नयाँ शुरू एप्पल फोन upsides र कमियां छन्.
एक ब्लग लेख हामी फोन प्रदर्शन को बारे मा लेख्न सक्छौं, विशेषताहरु, र मूल्यांकन र ब्लग पोस्ट मा छलफल. यो मूलतः प्रयोगकर्ताहरुलाई विश्वास गर्न र फिर्ता मा मद्दत गर्दछ, पाठकहरु टिप्पणी खण्ड मा सजीलै दुबै लेखकहरु साथै पाठकहरु को बीच एक सम्बन्ध बनाउँछ कि आफ्नो विचार लेख्नुहोस्.
यो एक कुराकानी र अन्तरक्रिया हो, विचारहरु को साझा कि अगाडि पैसा को एक ठूलो रकम कमाउन को लागी एक तरीका बन्छ यदि पाठकहरु लाई उचित मार्गदर्शन संग आफ्नो रुचि र सन्तुष्टि वफादार जानकारी देखाउँछन्.
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, लेख तपाइँ पढ्दै हुनुहुन्छ यो वेबसाइट मा एक ब्लग लेख हो. हाम्रो ब्लग पाठकहरु लाई बहुमूल्य उपयोगी जानकारी प्रदान गर्न मा हाम्रो वेबसाइट मा सबै लेख. हामी अनलाइन पैसा कमाउन को लागी साँचो तरिका साझा गरेर समुदाय लाई मद्दत गरीरहेका छौं. यसले उनीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको निराशा बाट बचाउँछ.
मलाई भन्न लाज लाग्दैन, मेरो ब्लगिंग यात्रा को शुरुवात को समयमा, मैले धेरै गल्ती गरें. त्यो समयमा, म पूरै नयाँ थिएँ. म आफैंलाई हराउँदिन, ब्लगिंग यात्रा मा अनुभव को सात बर्ष भन्दा बढी संग, मँ गल्तीहरु दोहोर्याउन को लागी तपाइँलाई ठीक तरिकाले मार्गदर्शन गर्न को लागी लाभ छ. केवल एक चीज हो कि तपाइँ यो लेख ठीक संग पढ्नु पर्छ.
यो गाइड मा, तपाइँ एक छिटो र सजीलो ब्लग शुरू गर्न को लागी एक उचित प्रक्रिया संग समाप्त हुनेछ.
6 तपाइँको ब्लग वेबसाइट बनाउन को लागी सजिलो कदम
चरण 1: तपाइँको ब्लग को नाम चयन गर्दै
चरण 2: ब्लग उपलब्ध अनलाइन बनाउनुहोस्
चरण 3: ब्लग अनुकूलन: सेटिंग्स
चरण:4पहिलो ब्लग पोस्ट लेख्दै
चरण 5: ब्लग लेख को पदोन्नति
चरण6: ब्लग मुद्रीकरण: पैसा कमाउनुहोस्
त्यहाँ शीर्ष छन्6तपाइँ तपाइँको ब्लग सुरु गर्नु अघि अनुसरण गर्न को लागी आवश्यक कदम.
छान्नुहोस् ब्लग नाम: सबै भन्दा पहिले, तपाइँ ब्लग को नाम छान्नु पर्छ.
डोमेन र होस्टिंग किन्नुहोस्: तपाइँको ब्लग अनलाइन उपलब्ध गराउनुहोस्.
तपाइँको ब्लग को स्थापना: ब्लग अनुकूलन.
तपाइँको ब्लग पोस्ट लेख्दै: अनुभव लेख्न को लागी एक महान रमाईलो
ब्लग को प्रचार: फेसबुकमा साझा गर्नुहोस्, ट्विटर आदि.
ब्लगिंग को माध्यम बाट पैसा कमाउनुहोस्: संबद्ध, विज्ञापन.
तपाइँको ब्लग सुरु गरौं
यो नाम हो कि तपाइँको घर को ठेगाना को बराबर छ. यदि पाठक वेब ब्राउजर मा नाम टाइप गर्नुहोस्, यो एक ब्लग वेबसाइट खुल्नेछ. म व्यक्तिगत रूपमा तपाइँ सम्बन्धित विषय संग एक ब्लग को नाम गर्न को लागी सिफारिश गर्दछु.
मैले पहिले भनेझैं, यो तपाइँको पसल को नाम जस्तै छ. तपाइँको ब्लग को नाम छनौट गर्न को लागी केहि मापदण्डहरु छन्. यहाँ एक सुझाव तपाइँ सधैं .com संग जानु पर्छ. कारण .com सामान्यतया विश्वव्यापी भरोसायोग्य छ. यो मूलतः व्यावसायिक उद्देश्य को लागी प्रयोग गरीन्छ.
यस्का साथसाथै, तपाइँ एक ब्लग कि तपाइँ जीवन मा व्यावहारिक अनुभव छ लेख्नु पर्छ. म व्यक्तिगत रूपमा तपाइँ सामग्री को प्रशस्त हुनु पर्छ लाग्छ.
तपाइँ तपाइँको लेख्न सक्नुहुन्छ 100 लाई 200 ब्लग पोस्ट धेरै सजीलो. जबकि, यदि तपाइँ एक विषय लेख्दै हुनुहुन्छ कि तपाइँ यस बारे मा सचेत हुनुहुन्न निश्चित रूप मा लेखन पछि समाप्त हुनेछ 50 लाई 60 लेख.
उदाहरण को लागी, मैले भर्खरै मेरो शिक्षक साथीलाई मद्दत गरें जो भौतिकी को राम्रो ज्ञान छ. उनी एक महिना पहिले आफ्नो ब्लग सुरु गर्न चाहन्थे र इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्स लेख्नमा रुचि राख्थे. मैले उसलाई फिजिक्स को बारे मा लेख्न को लागी सिफारिश दिएँ किनकि तपाइँसँग गहन ज्ञान छ.
एक राम्रो तरीका एक समान स्थिति संग तपाइँको विद्यार्थीहरु लाई तपाइँ तपाइँको विद्यार्थीहरु लाई पढाई को सामना गर्न को लागी मद्दत गर्न को लागी.
हामी एक महान छलफल थियो, त्यस्तै, तपाइँ आफ्नो जीवन को अनुभव को बारे मा एक ब्लग लेख्नु पर्छ यो सधैं शौक संग जान को लागी राम्रो छ, जुनून वा पेशा.
दोस्रो चरण तपाइँको ब्लग अनलाइन उपलब्ध गराउनु हो. यो गर्न सकिन्छ यदि तपाइँ यसलाई होस्टिंग प्याकेज संग ठीक संग दर्ता गर्नुहोस्.
अर्को चरण तपाइँको ब्लग अनलाइन उपलब्ध गराईरहेको छ. यसको मतलब यदि कसैले तपाइँको ब्लग को सामग्री ब्राउजर मा तपाइँको ब्लग को नाम टाइप गरेर खोजी गर्दछ. तपाइँको ब्लग देखा पर्नु पर्छ. यो गर्न को लागी तपाइँ होस्टिंग किन्नु पर्छ. यी दिनहरु केहि राम्रो प्रस्तावहरु जाँदैछन् कि तपाइँको होस्टिंग लागत लाई धेरै कम गर्दछ.
म व्यक्तिगत रूपमा तपाइँलाई एक डोमेन नाम लागत संगै होस्टिंग लागत छुट्टै तिर्न नहुने सल्लाह दिन्छु. यो समग्र ब्लग वेबसाइट लागत वृद्धि हुनेछ.
यसको सट्टा, Bluehost जस्तै केहि होस्टिंग कम्पनीहरु तपाइँ एक मुक्त डोमेन dot.com नाम संग होस्टिंग सेवा प्रदान गर्न मद्दत. अन्य वेबसाइटहरु सेवाहरु तपाइँ एक कम लागत मा तपाइँको ब्लग को निर्माण गर्न को लागी अनुमति दिन्छ. हामीले उनीहरुलाई तल तालिकामा उल्लेख गरेका छौं.
तेस्रो चरण, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट अनुकूलित गर्न को लागी. अनुकूलन एक छिटो लोडिंग विषयवस्तु सेटि समावेश छ, वेबसाइट लेआउट, फन्ट आकार, आदि आधारभूत सुविधाहरु.
यो मूल रूप मा एक राम्रो टेम्पलेट को निर्णय शामिल छ. तपाइँको वेब सामग्री को प्रस्तुतीकरण को बारे मा सबै संलग्न छ, ठीक देखिन्छ, सफा छ, राम्रो, र रोचक.
तपाइँको आधारभूत वेबसाइट को स्थापना पछि, यो केहि राम्रो ब्लग पोस्ट लेख्न को लागी समय हो.
तपाइँको पहिलो ब्लग पोस्ट लेख्दै. मलाई लाग्छ कि यो एक महान तरिका संसार संग आफ्नो विचार साझा गर्न को लागी हो. म प्राय जसो यो भाग को आनन्द लिन्छु किनकि तपाइँ तपाइँको आफ्नै अनुभव साझा गर्दै हुनुहुन्छ के तपाइँ तपाइँको जीवन मा प्राप्त गर्नुभयो.
उपयोगी ब्लग पोस्ट कि मानिसहरु आफ्नो समस्या खोजिरहेका छन् र तपाइँ यसको बारे मा धेरै ज्ञान छ. यसका लागि, म सामान्यतया गुगल को मद्दत ले स्वत: पूरा गर्न को लागी केहि एसईओ उपकरणहरु लिन्छु. जब हामी संयोजन र खोज सर्तहरु को एक अनुमानित भोल्युम को खोज संग दुबै को मूल्यांकन. यो मूल रूपले मलाई अधिक प्रेरित गर्दछ कि एक विशेष लेख पढ्ने मानिसहरु को एक धारणा संग एक लेख लेख्न को लागी
यहाँ म तपाइँलाई एक प्रो टिप दिन चाहन्छु. तपाइँ आफ्नो लेख उचित पृष्ठ एसईओ प्रविधि संग लेख्नु पर्छ. कारण यो छ– यसले गुगल लाई बुझ्न को लागी तपाइँ सामग्री लाई धेरै नजिक बाट र ठीक ढंगले गर्न मद्दत गर्दछ. निस्सन्देह गुगलले आफ्नो धेरै सुधार गरेको छ. नयाँ आविष्कार प्रविधि संग, उनीहरु सामग्री लेख्न को लागी बुझ्न सक्षम छन्.
अर्को चरण ब्लग पोस्ट को पदोन्नति हो. सबैभन्दा लोकप्रिय प्लेटफर्म फेसबुक हो, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यी सबै प्लेटफर्महरु लाखौं ट्राफिक छन्.
यो मूलतः मार्केटि that को एक हिस्सा हो कि पक्कै तपाइँलाई चाहिन्छ. तपाइँको ब्लग पोस्ट को पहिलो प्रक्षेपण मा, यो धेरै समय लाग्छ मानिसहरुलाई थाहा छ कि तपाइँ को हो र तपाइँको ब्लग को बारे मा हो. यो अवस्था मा, तपाइँ जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको ब्लग के हो पाठकहरु लाई भन्नुहोस्? तपाइँ कस्तो प्रकारको सामग्री लेख्दै हुनुहुन्छ? फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आजकल एक राम्रो मार्केटि do गर्न को लागी लोकप्रिय तरीका हो
मेरो पहिलो ब्लग यात्रा को शुरुवात को क्रममा, जब मैले त्यो समयमा लेख लेखें, मैले प्रासंगिक फेसबुक समूह संग मेरो ब्लग पोस्ट साझा. यसले मलाई मेरो वेबसाइटमा यातायात चलाउन मद्दत गर्दछ.
यस्का साथसाथै, ट्विटर मा, तपाइँ ह्याशट्याग को लाभ लिन सक्नुहुन्छ. इन्स्टाग्राम मा, तपाइँ आफैंलाई एक वेबसाइट ब्लग ब्रान्ड नाम संग प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ. इन्स्टाग्राम पोष्टहरु को लागी छोटो भिडियो बनाउनुहोस् कि उनीहरुलाई बलियो बनाउनुहोस् र केहि लुकाउनुहोस् कि मानिसहरु लाई गुगल मा तपाइँको ब्लग को नाम टाइप गर्न को लागी तपाइँ कहाँ हुनुहुन्छ पत्ता लगाउन र तपाइँको सामग्री लाई जति सक्दो पढ्ने इच्छा देखाउन को लागी धक्का दिन्छ।.
जब तपाइँको ब्लगिंग सामग्री दर्शकहरु को बीच लोकप्रिय हुन्छ. तपाइँसँग यो मुद्रीकरण गर्न धेरै तरिकाहरु छन्. विषय मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ लेख्दै हुनुहुन्छ तपाइँ मुद्रीकरण र तपाइँको पाठकहरु को माध्यम बाट पैसा कमाउने सबैभन्दा राम्रो तरीका छान्नु पर्छ.
अब, जब यो तपाइँको वेबसाइट को मुद्रीकरण को लागी आउँछ. इमान्दारितापूर्वक, मुद्रीकरण वेबसाइट को प्रकार मा तपाइँ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ. उदाहरण को लागी, यदि म सौन्दर्य क्रीम को बारे मा लेख्दै छु. मेरो ब्लग पोस्ट मा, यो अवस्था मा, मसँग अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरु को लागी अमेजन को केहि उत्पादनहरु को सिफारिश गर्ने अवसर छ.
जब म लेख लेख्न जारी राख्छु, मँ मेरो आफ्नै अनुभव साझा गरीरहेछु उत्पादनको साथमा मँ प्रयोग गरीरहेको छु.
जब तपाइँ उल्लेख गरीएको उत्पादन संग किनेको हो अमेजन सम्बद्ध लिंक, यो बदले मा तपाइँलाई केहि राम्रो कमीशन दिनेछ.
अर्कोतर्फ, सम्बद्ध को कार्यान्वयन आवश्यक प्रत्येक विषय मा लागू गरीएको छैन. आजकल, तपाइँ आफैंलाई मात्र AdSense मा सीमित गर्न सक्नुहुन्न. त्यहाँ mediavine जस्तै धेरै लोकप्रिय मिडिया विज्ञापन प्लेटफार्महरु छन्, Ezoic कि पक्कै तपाइँ कमाउन मद्दत 1000 + विज्ञापन संग मात्र डलर.
मैले पहिले यो लेख मेरो साथी जो एक शैक्षिक वेबसाइट हो कि सख्ती संग विज्ञापन संग मुद्रीकृत चलिरहेको छ र उहाँ आफ्नो जुनून बाट केहि राम्रो राजस्व कमाई रहेको छ छलफल गरीयो।.
तपाइँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ:
सम्बद्ध र विज्ञापन सँगै गर्दै
कुल मिलाएर, एक ब्लग शुरू यी दिनहरु साँच्चै मूल्यवान छ. तपाइँ केहि पनी लेख्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ रुचि राख्नुहुन्छ. तपाइँ आफैलाई एक विशेष क्षेत्रमा सीमित गर्न को लागी छैन. कुरा यो हो कि तपाइँ दर्शकहरु र बदले मा अनुभव साझा गर्नुहोस्, तपाइँ त्यसबाट पैसा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ.
Previous Postकसरी डोमेन नाम खरीद गरेपछि वेबसाइट निर्माण गर्ने?